ပန်ဒိုရာ: Blog Seminar အပြီးတွင်
(ဓာတ်ပုံကို ဒီက ရယူပါသည်။)
အမှန်ကတော့ ဒီမြို့ထဲမှာ ကဗျာတွေ ဆက်တင်မလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် နေ့လည်က ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပတဲ့ Why do we blog? Seminar ကို ဒီဘလော့ဂ် ကတဆင့် သွားရောက် အားပေးခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုပြီးတစ်ခု တက်လာတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်ရတာ သူတို့တွေရဲ့ အပျော် ကိုယ့်ဆီပါ ကူးစက်မိတဲ့အတွက် ဒီမြို့ကို ခဏလေး နားပြီး ဒီပို့စ်ကို ရေးလိုက်ပါတယ်။
Why do we blog? အလွန်ကောင်းတဲ့ မေးခွန်းလေးပါ။ ပွဲမစခင်မှာ ဘာညာနဲ့ ဂျီမှာတွေ့တော့ ကိုယ်ထင်မြင်တာလေး အချို့ သူ့ကို ဝေမျှလိုက်ပါသေးတယ်။
ဘလော့ဂ်တွေမှာ ရေးကြတာတွေကို လိုက်ကြည့်ရင် အမျိုးမျိုးပါပဲ။ တချို့က နည်းပညာ အသားပေးတယ်။ တချို့က ဒိုင်ယာရီဆန်တယ်။ တချို့က အနုပညာဖန်တီးမှုတွေ။ တချို့က လာဖတ်သူကို စကားပြောပြဟန်။ တချို့က ဗဟုသုတတွေကို ဖြန့်ဝေတယ်။ အဲဒီလို မဂ္ဂဇင်း တစ်အုပ် ၊ ၀တ္တုတစ်အုပ်၊ စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့မတူတဲ့ ကွဲပြားနိုင်ခွင့် ဟာ ဘလော့ဂ်တွေမှာ ရှိတယ်။
ကိုယ်တိုင်ရေး ကိုယ်တိုင်တည်းဖြတ် ကိုယ်တိုင် ချက်ချင်း ထုတ်ဝေတယ်။ လွတ်လပ်မှု ကို ချက်ချင်းခံစားရသလို ကိုယ်ရေးတဲ့စာဟာ ကိုယ့်တာဝန်ဖြစ်တယ်။
ဖတ်သူများဆီက တုံ့ပြန်မှု ဖွင့်ထားပေးတယ်။ ချက်ချင်းလည်း တုံ့ပြန်မှုတွေရတယ်။ ရေးသူနဲ့ ဖတ်သူ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု ရှိတယ်။
ဒါတွေဟာ တချို့နိုင်ငံ တချို့လူမျိုးတွေ အတွက်တော့ နေ့စဉ်ဘ၀နဲ့လည်း သိပ်မခြားနားတဲ့ မထူးဆန်းတဲ့ အရာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ သေသေချာချာ တွေးကြည့်ရင် တို့တွေ အတွက်တော့ ဒါဟာ တိုးတက်သော လွတ်လပ်ပွင့်လင်းသော လူ့ဘောင်တစ်ရပ်ကို ဦးတည်သွားနိုင်တဲ့ မရခဲ့ဖူးသော အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ကို နည်းပညာအကူအညီနဲ့ ခေါ်ဆောင်ခံရခြင်း ဖြစ်တယ်။
အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးကြားက အချိန်ပေးပြီး စီစဉ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာပြည်တွင်း နေထိုင်ကြသော ဘလော့ဂါများကို အထူးသဖြင့် ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဒီနေရာအထိ အောင်အောင်မြင်မြင် ရောက်လာခဲ့တာ ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေရဲ့ တတပ်တအား စည်းလုံးညီညွတ်မှုကြောင့် ပါပဲ။
ကဲ .. ရှေ့ဆက်လှမ်းကြဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။
Posted by pandora at 1:24 AM
that is great and thank you ma pan for this post.
we blog we unite , won't you?
Thanks Thanks Thanks Chit pan
အင်း- ပိုက်ပိုက်တော့ ကုန်တယ်ဗျ :(